I-Ads.txt ne-Ads.cert zikuvimbela kanjani ukukhwabanisa kokukhangisa? | Martech Zone
I-Ads.txt ne-Ads.cert zikuvimbela kanjani ukukhwabanisa kokukhangisa?
NgoMgqibelo, ngoMashi 24, 2018 NgoMgqibelo, ngoMashi 24, 2018 Douglas Karr
Embonini eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 25, ama- $ 6 billion enkohlisweni akuyona into encane… iyingozi ngqo embonini. Lezo zibalo zivela ocwaningweni olwenziwe yi- Inhlangano Yabakhangisi Kazwelonke, osebenzisane nenkampani yezokuphepha edijithali I-WhiteOps. Ukukhethwa okuzenzakalelayo okusebenzisa amapulatifomu wokukhangisa ohlelo akusizanga. Uma ungahlela ama-algorithm wokukhomba, ungahlela nezinhlelo zokuheha ukukhangisa.
Ukuboleka kwezinye izimboni, njenge-imeyili, Amalebhu e-IAB athuthukise ukucaciswa kwe-Ads.txt. I-Ads.txt inethemba lokuvimba ukukhwabanisa ngokwakha inkomba yabadayisi nabashicileli abagunyaziwe.
Izikhangiso.txt zimele Abadayisi Bedijithali Abagunyaziwe futhi iyindlela elula, eguquguqukayo futhi evikelekile engasetshenziswa ngabashicileli nabasabalalisi ukumemezela obala izinkampani abazigunyazayo ukuthi zithengise uhlu lwazo lwedijithali. Ngokwakha irekhodi lomphakathi labaGunyaziwe Abadayisi Bedijithali, i-ads.txt izodala ukubonakala okukhulu kuhlu lwezinto ezithengiswayo, futhi inikeze abashicileli ukulawula okuqoqiwe kwabo emakethe, kwenze kube nzima ngabadlali ababi ukuthi bazuze ngokuthengisa izinto ezingumkokotelo kuyo yonke imvelo. Njengoba abashicileli bethatha izikhangiso.txt, abathengi bazokwazi ukukhomba kalula Abadayisi Bedijithali Abagunyaziwe kumshicileli obambe iqhaza, okuvumela imikhiqizo ukuthi izethembe ukuthi ithenga uhlu lwangempela lomshicileli.
Ungabona i-my izikhangiso.txt file, lapho ngineLiveIntent (ipulatifomu yesikhangiso se-imeyili) neGoogle Adsense (inethiwekhi yethu yesikhangiso) ebhalwe ohlwini.
Izikhangiso.txt ziyindlela enhle yoku ukugunyaza ukubekwa kwesikhangiso kusayithi lakho. Kodwa-ke, ayiqinisekisi umthombo wesikhangiso. I-Ads.cert okwamanje isakhiwa ukwenza lokho nje. Ngokufana nokusebenza kwe-blockchain technology, i-Ads.cert izokuqinisekisa ukuthi ugunyaza ukubekwa kwesikhangiso, kanye nokuqinisekisa i-Demand Side Platform (noma i-DSP).
I-Ads.cert, kanye ne-Ads.txt kuzoqinisekisa:
Uzakwethu ngu igunyaziwe ukuthengisa.
Ukufakwa kwesikhangiso kungukuthi eyiqiniso.
Iqoqo lezikhangiso belilokhu likhona kungaguqulwanga.
Kukhona ezinye umbuzo maqondana nokuthi ngabe lolu hlelo luyinkimbinkimbi noma lungacubungula izicelo eziningi kangaka kanye nedatha ngesikhathi sangempela njengoba kudingeka. Kusazobonakala.
Nakhu ukubuka konke okubonakalayo kokucacisiwe okusuka ku- I-Smart AdServer, Ukulwa Nokukhwabanisa Ngamazinga: I-Ads.txt neAds.cert Kuchaziwe.
Tags: ukufakazela ubuqiniso besikhangisoukugunyazwa kwesikhangisoukukhwabanisa kwezikhangisoyokusungula izikhangisoizikhangiso.certizikhangiso.txtIABjames hercherisikhangiso esihlakaniphile
I-Lumen5: Izindatshana Eziphindaphindwayo Zingene Kumavidiyo Omphakathi Kusetshenziswa i-AI